Soo dejisan Psiphon 113 – Android – Vessoft
Internet, Programka sirta
Soo dejisan Psiphon
Psiphon – software ah oo loogu talagalay si ay u helaan helaan furan goobaha tixan ama hor istaagay. Psiphon isticmaalaa technology ee kala duwan in ay ku xidhmaan server barnaamijka oo bixiya helaan si ay content ugu xidhmey dhex network wakiil ah. software ayaa si toos ah isku xira gobolka la xidhiidh ah loo isitcmaalo oo ka furmay content ee browser-urursiga ee, kaas oo la qorsheeyay in ay garab faafreeb ku. Psiphon awood si ay u bixiyaan joogista ah ee internet isticmaalaya ah dadweynaha Wi-Fi. Sidoo kale software soo bandhigayaa tirakoobyada ee isticmaalka gaadiidka.
Helitaanka goobaha tixan ama xidhmey
xulashada Automatic ah hab maamuuska ku
isticmaalka Secure oo ka mid ah dadweynaha Wi-Fi
Statistics of isticmaalka gaadiidka
Psiphon Software la xiriira:
Internet software The si ay ula socdaan isticmaalka xogta mobile. software The lafaguraa iyo bandhigayaa xaddiga gaadiidka by codsiyada kala duwan loo isticmaalo muddo waqti go'an.
Internet Software la dhaafayo furid gobolka khayraadka web iyo qarin dhabta ah IP-address joogeyso si qarsoodi ah in internet-ka.
العربية, English, Українська, Français... WiFi Manager 3.5.4.2
Internet An fudud in la isticmaalo software si ay u maareeyaan shabakadaha WiFi ah. Software soo bandhigayaa warbixin ku faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda ka mid ah shabakadaha laga heli karo.
English, Français, Español, Deutsch... OpenVPN 1.1.16
Programka sirta software ah in quful codsiyada, gallery, internet, goobaha menu, liisaska xidhiidhka ama files kale la password a.
العربية, English, Français, Español... Tango 3.14.134034
العربية, English, Українська, Français... Mobogenie 2.6
Phone Qalab Functional si ay u maareeyaan ka kooban qalab iyo dagsado ka adeega Mobogenie. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u qabtaan gurmad ah.
English, Українська, Français, Español... imo 9.4.1
العربية, English, Українська, Français... Viber 5.5.2.28